သည် PC-အခြေပြုက Wired ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ် China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:က Wired သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်,သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်,ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရပ်ကွက်သူနာပြုစနစ် > ဆေးရုံရပ်ကွက်သူနာပြုစနစ် > သည် PC-အခြေပြုက Wired ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်
ထွက်နိုင်ရေး: 300 unit /month
Eter သည် PC-အခြေပြုက Wired ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ် System ကိုဆရာဝန်တွေ, သူနာပြုများနှင့်လူနာများအကြားအင်အားကြီးဆက်သွယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းဖန်တီးမှုစကားသံကိုသတိပေးသစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းမသာဖြစ်သောဆေးရုံ digital ဆောက်လုပ်ရေး, သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပေးရန်, သတင်းအချက်အလက်အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် စုဆောင်းခြင်း, သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စသည်တို့ကို, ရပ်ကွက်မှဆေးရုံသတင်းအချက်အလက်စနစ် (သူ့) ကိုဆန့်။ ဒီစနစ်ဟာအလွန်ကြီးသူနာပြုဝန်ထမ်း၏လုပျငနျးပြင်းထန်မှုများလျော့နည်းကျဆင်းမှတပါးသူနာပြုအရည်အသွေးတစ်ခုန်အမှန်တကယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
PC-အခြေပြုက Wired ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်၏အင်္ဂါရပ်များ :
ပြည်တွင်းရေးဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်နှင့် operated ခံရဖို့လွယ်ကူသည်သည်အဘယ်မှာရှိဆေးရုံများအတွက်သင့်လျော်သော WNS ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ PC ကိုချိတ်ဆက်နိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုချက်အဖြစ် 1. အက်ဥပဒေ။
2. အဆိုပါမဟာဘွဲ့ Host က 200 extension များ (ပါဝငျအိပ်ရာ extension ကို, တံခါးကို extension ကို, ရေချိုးခန်း extension ကို) ထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ WNS software ကိုလူနာသတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
LED ညဥ့်အလင်းရှိကိုငျတှယျ 4.Smart ။
multicolour တံခါးကိုဆီမီးခွက်တပ်ဆင်ထား 6. တံခါးတိုးချဲ့မှု, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခွအေနေညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
သည် PC-အခြေပြုက Wired ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ:
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ရပ်ကွက်သူနာပြုစနစ် > ဆေးရုံရပ်ကွက်သူနာပြုစနစ်
ETR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
က Wired သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်
Two-က Wired သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်
က Wired လူနာသူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်
က Wired သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ် သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ် ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ် သူနာပြုခေါ်ရန်ဘူတာစနစ် Two-က Wired သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် ဆေးရုံသူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ် လေးက Wired သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် က Wired လူနာသူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်